[28 / 02 / 2020] İZTAŞIT Uygulaması İzmir’in Diğer İlçelerinde De Hizmete Girecek	35 Izmir
Maalinta: 22-ka July, 2019
Falanqaynta Nidaamka Nidaamka Gaadiidka Tareenka
Ka shaqeeya UYEM way sii socotaa
Hawlaha dib u soo celinta ee dhismihii taariikhiga ahaa ee Kirazlıyayla Sanatorium, kaas oo loo beddeli doono xarun tababar iyo hoy oo loogu talagalay adduunka meheradda iyada oo la adeegsanayo Xarunta Ganacsiga iyo Warshadaha ee Bursa oo hoos imaneysa Xarunta Uludağ Lifelong Education Center (UYEM), oo si isdaba joog ah u socota. [More ...]
Maalgashatada Shiinaha ee BTSO
Xiriirinta Ganacsiga Guud ee Shirkadda Shiinaha ee Istanbul, Songfeng Huang iyo wafdiga Ganacsatada Shiinaha iyo Warshadaha Shirkadda Shiinaha ayaa booqday BTSO. Xubinta Guddiga BTSO Cusmaan Nemé ayaa la kulmay wafdi ka socda Bursa iyo Shiinaha [More ...]
Dabayaaqadii ka soo wareegtay Howlgalka Shixnadaynta Gawaarida ee KMNC
Munaasabad lagu wareejinayo maraakiibta shixnadaha ee TRNC Gir ayaa lagu qabtay Port Kyrenia ee TRNC. Xaflada, Ra'iisul wasaare ku xigeenka iyo sidoo kale Madaxweynaha Tatar Fuat Oktay, Ambassador Turkey ee Nicosia, Ali Murat Başçer ah Guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Celal Adan, Turkey [More ...]
tareen koowaad waxaa laga qaadaa wadooyinka dhoofinta dhexeeya Turkey iyo Georgia, amar doonaa xaflad sagootin ah lagu qaban doonaa Xarunta Palandöken Logistics Erzurum. Iron Silk Road, loo yaqaan Baku-Tbilisi-Kars (BTK) la Turkey, la soo galo geli of line tareenka [More ...]
TÜVASAŞ ayaa soo saartay waraaq loo qoro. Turkey ee pozison kala duwan si ay ula kulmaan shaqaalaha yaraanta gudahood TÜVASAŞ ah Sida laga soo xigtay ku dhawaaqay, oo waxaa la daabacay on Agency shaqada ka dhigi doonaa shaqaalaha 26 on dhaweynta. Soo iibsashada sida ku qoran Naqshadda la daabacay [More ...]
41 sano ayaa ka gudbay shilalka tareenka xawaaraha sare ku socda ee Pamukova halkaas oo 15 ay naftooda ku waayeen, laakiin casharro lagama baranin shilalkaan iyo dhimashada cusub ee wadada tareenka ayaa sii socota. Sida uu sheegayo Derye Kaya oo ka socda Evrensel; [More ...]
Afyon Gar iyo Kocatepe University AFRAY 1. Marxaladda 2. Qoondeyn ayaa loo qoondeeyay dhismaha khadka caadiga ah, sahaminta, mashruuca, injineernimada iyo adeegyada latalinta. Duqa magaalada Mehmet Zeybek, TCDD [More ...]
Ankara Metropolitan Road-Asfalt, Xuduudaha Baabuurta iyo Iskuulka Xaafada
Dawlada Hoose ee Magaalada Ankara, 65 kun oo mitir murabac ah oo qadka wadada ah inta u dhaxaysa Abriil iyo Juun, 4 kun oo mitir murabac ah oo socod lug ah iyo socod marin ah ayaa laga fuliyay jidadka iyo wadooyinka dhexdooda mas'uuliyadda. Dawlada Hoose ee Magaalada sayniska [More ...]
Samsung Bosphorus Intercontinental Dance Excitement Ends
Waxaa kaloo la qabtay Tartan loogu talo galay Dabbaaldegga Caalamiga ah ee Samsung, kaasoo lagu tilmaamay inuu yahay hay'adda dabbaasha biyaha ee ugu wanaagsan adduunka isla markaana ay abaabushay iyadoo la kaashanayo Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul. 1 dumarka. Ilgın Celik, halka ragga 1.lik [More ...]
Ordu Boztepe Qiimaha Teleferik, Saacadaha iyo Guryaha
Khadaka gawaarida Ordu Boztepe waa mid ka mid ah gobolada dalxiiska ugu caansan ee Badda Madoow. Waxay ku taalaa badhtamaha wadada xeebta Badda Madow, Ordu, oo leh quruxdeeda dabiiciga ah iyo muuqaalkeeda, waxay soo dhawaynaysaa martida booqda labadaba toos iyo wadada. [More ...]
Yahya Captain People 'Ma dooneyno in aan geedo u jarno tareenka'
Dadka Yaxye Captain Dadka 'Ma doonayno inaan jarinno geedaha taraamka'. Wadada cusub ee laga hirgalin doono magaalada Yaxya Kaptan ee Akçaray, dadka daggan xaafada oo aan dooneynin inay jarjaraan geedaha ayaa isu yimid waxayna u yeerayaan dawlada hoose ee magaalada. [More ...]
Saldhigyada Akçaray ma laha qashin qashin maxaa yeelay deegaanka ku xeeran xarunta ayaa wasakh ku ah waqti kasta oo maalinta ah sida laga soo xigtay wargayska Kocaeli Peace News Sebahattin Aydın; Ak Akaray, oo ah wadada ugu isticmaalka badan dadka Izmit, [More ...]